गैरआवासीय नेपालीले गोरखामा साढे ४ मेगावाटको जलविद्युत् निर्माण गर्ने
चैत ७, २०७६
गैरआवासीय नेपाली तथा स्थानीय साझेदारको संयुक्त लगानीमा गोरखामा एक जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ ।
विकास हाइड्रोपावर कम्पनीले गोरखाको माछा खोलामा अप्पर माछाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । कूल ४.५५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा मलेसियामा लामो समयदेखि व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्न लागेका हुन् ।
कूल रु ८१ करोड ६५ लाख लागत रहेको सो आयोजनामा स्वपूँजीका रूपमा लगानीकर्ताले रु ३२ करोड ६५ लाख लगानी गर्ने भएका छन् । यस्तै आयोजनालाई सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले रु ४८ करोड ९९ लाख लगानी गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । स्वपूँजी र ऋण लगानीको मात्रा ४० र ६० प्रतिशत रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनीले दिएको जानकारीअनुसार सम्झौतापत्रमा विकास हाइड्रोपावरका तर्फबाट अध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रवर्द्धक विकास हाइड्रोपावरका अध्यक्ष न्यौपानले साना आयोजनाबाट निर्माण शुरु गरेर ठूलो आयोजनामा जाने सोचका साथ आफूहरु जलविद्युत् आयोजनामा हात हालेको बताउँछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग वर्षाकालमा प्रतियुनिट चार रूपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा प्रतियुनिट आठ रूपैयाँ ४० पैसामा विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको छ । आगामी विसं २०८० साल असारमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको निर्माण शुरू भइसकेको जानकारी दिँदै प्रवर्द्धक कम्पनीले भने २०७८ असार भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
“जतिसक्दो चाँडो आयोजना निर्माण सम्पन्न भयो, त्यत्ति नै हाम्रा लागि राम्रो हुने भएकाले सोहीअनुसार नै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ”, अध्यक्ष न्यौपानेले भने । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कूल ३३ किलोमिटर लामो ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत प्राधिकरणको सल्यानटार सवस्टशेनमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाले वार्षिक कूल २८.१८ गिगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले सानो आयोजना भए पनि आकर्षक रहेकाले बैंकले लगानी गरेको बताए ।
उनका अनुसार वाणिज्य बैंकले मात्रै हालसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा कूल रु १० अर्ब लगानी गरिसकेको जानकारी दिँदै केही महत्वपूर्ण आयोजना पाइप लाइनमा रहेको बताए ।
“ऊर्जा क्षेत्रका केही लगानी तितो भए पनि धेरै लगानी मीठो र सकारात्मक रहेको छ । हामी उच्च प्रतिफल दिने र आकर्षक आयोजनामा दिल खोलेर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ”, उनले भने ।
बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै कूल रु पाँच अर्ब चार करोड मुनाफा गरेकाले पनि थप आयोजना अगाडि बढाउन कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।
भौगोलिकरूपमा पनि आयोजना निर्माण स्थल सहज रहेको उल्लेख गर्दै आयोजनाले हिउँदमा समेत उच्च प्रतिफल दिने प्रवर्द्धक कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
ग्यास उद्योगीलाई निगमको तीन बुँदे निर्देशन: 'एक पर...
कोरोना कोषमा दुई लाख ५१ हजार
खाद्यान्न र तरकारी चाहिए भाटभटेनीलाई फोन गर्नुस्, ड...
टेलिकमले रिचार्जमा शतप्रतिशत बोनस दिने
कोरोनाको महामारी : संघीयता खारेज गर्ने षड्यन्त्र हुनसक्छ, सक्रिय बन प्रदेश सरकार !
‘लक–डाउन’ कहिलेसम्म ? नेपालको तयारी – चीनको जस्तो कि फिलिपिन्सको जस्तो ?
वैवाहिक जीवनलाई सफल बनाउन अपनाउनुहोस् यी १० उपाय
लकडाउनको मौका छोपी कालोबजारी, एक जना पक्राउ
कोरोना सङ्क्रमित भन्छन् : मेरो ख्याल गरियोस्, औषधी के खाने हो परामर्श चाहियो
कोरोनाविरुद्ध लकडाउन प्रभावकारी
राति कामुक सपना आयो ? जान्नुहोस् कारण
दिउँसो सुत्ने बानी छ? सताउला यस्ता रोगले
कोरोना: २० खर्ब डलरको राहत प्याकेजका लागि कानुनमा हस्ताक्षर गरे ट्रम्पले